ပြည်သူတွေအားလုံးက ဘာလို့လက်မခံတာလဲသိလား ?
July 4, 2019 Cele Love 0
ပြည်သူတွေအားလုံးက ဘာလို့လက်မခံတာလဲသိလား ? ။ ဒီအရွယ်နဲ့ဒီအရွယ် ကလေးက ကိုကို လို့ခေါ်တာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်လို့ ကလေးရဲ့ပြောစကားတွေနဲ့ တရားခံနဲ့ လုံးဝ ကိုက်ညီမှုမရှိ ယုတ္တိမရှိလို့ပါ …။ ၂ ။ ဒီအရွယ်လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်မှု ခံလိုက်ရတဲ့ကလေးဟာရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်တဲ့ ဒါဏ်ရာတွေရှိနေရမယ် ဒါဟာ အဓိကအချက်ထဲမှာပါဝင်တယ် …။ […]
အောင်ကြီးကတော့ အချုပ်ခန်းထဲကနေ ကျနော် မဟုတ်ဘူးကျနော်….
အောင်ကြီးကတော့ အချုပ်ခန်းထဲကနေ ကျနော် မဟုတ်ဘူးကျနော်…. Ko Lucent အကောင့်မှာ တင်ထားသည့် ပိုစ့်ကို ပရိတ်သတ်များအတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ….။ အဆိုပါ အကောင့်မှ ” Wisdom Hill ကိစ္စစဖြစ်စဉ်က ကျနော်ကလမ်းတကာလျှောက်သွားနေတာ။အဲ့မှာအောင်ကြီးရဲ့ အစ်ကိုကြီး ကိုသိန်းဦးဆိုတာနဲ့ကျနော့်က ခင်မင်မှုရှိတယ်။အောင်ကြီးဆိုတာသူပြောမှသူညီမှန်းသိတာ။သူညီအဖမ်းခံရမှုနဲ့ကျနော့်ကိုလာပြောတော့။ဘာမှုလဲဆိုတော့…..အမှုပါတဲ့ ၊ […]
ဝေကြီးရဲ့…သုံသပ်ချက် Justic for Victoria
ဝေကြီးရဲ့…သုံသပ်ချက် Justic for Victoria အောင်ကြီးက ဖယ်ရီကား ကျောင်းကားရဲ့ ဒရိုင်ဘာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆို ပိုပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးမလား…??? ကလေးကိုလမ်းမှာကျင့်တာမဟုတ်ပဲကျောင်းထဲတင်ကျင့်တာလို့ မှတ်ယူရမှာပေါ့ CCTVမှတ်တမ်းအရ ၎င်းဒရိုင်ဘာဟာ ကျောင်းထဲကိုဝင်ရောက်တာ ၂၆မိနစ်ခန့်ကြာတယ်ဆိုတယ်ကလေးနဲ့ဘယ်လိုတွေ့သလဲ လူစိမ်းဖြစ်တဲ့သူကကလေးကိုအလွယ်တကူခေါ်လို့ရသလားဆရာမတွေ ဘာလုပ်နေလဲ …??? ကျောင်းထဲမှာ အလွယ်တကူ မုဒိမ်းကျင့်ရတဲ့နေရာရှိသလား ခနလေးဝင်လာပြီး ကလေးတစ်ယောက်ကိုမုဒိမ်းဝင်ကျင့်သွားတဲ့အထိ ကျောင်းက ပေါ့လျော့သလား […]
“သားသမီးတွေ ကြီးလာတဲ့အခါ မိဘတွေနောင်တရစေမဲ့ အပြုအမူမျိုးတွေ”
“သားသမီးတွေ ကြီးလာတဲ့အခါ မိဘတွေနောင်တရစေမဲ့ အပြုအမူမျိုးတွေ” မိဘအများစုဟာ ကိုယ့်သားသမီးအပေါ် ကောင်းစေချင်တဲ့စိတ်ကတော့ ၁၀၀ ရာခိုင်းနှုန်းရှိကြတာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ထိန်းကျောင်းမှုပုံစံတွေက လွဲမှားမှုတွေရှိနေတဲ့ အခါ ကလေးတွေဟာ လိမ္မာချင် သယောင်ယောင်နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဆိုးသွမ်း သွားတတ်ကြပါတယ်။ တခါတလေမှာ အရမ်းထိန်းချုပ်တတ်တဲ့ မိဘရဲ့ သားသမီးက ငယ်ငယ်တုန်းက […]
VICTORIA အမှု တရားခံဟု ရုံးတင်စွပ်​စွဲခံထားရတဲ့ ယာဉ်မောင်း အောင်ကြီးအတွက်​ အကိုဖြစ်​သူ၏​ပေါက်​ကွဲသံ
VICTORIA အမှု တရားခံဟု ရုံးတင်စွပ်​စွဲခံထားရတဲ့ ယာဉ်မောင်း အောင်ကြီးအတွက်​ အကိုဖြစ်​သူ၏​ပေါက်​ကွဲသံ လွန်ခဲ့တဲ့ မိနစ်ပိုင်းက Ko Lucent ဆိုတဲ့ အကောင့်က တင်ထားတာကို ပရိတ်သတ်များသိအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော် …… ပရိသတ်ကြီးရေ Victoria လေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ကတော့ ပရိသတ်အားလုံး စိတ်ဝင်အစားခံရဆုံး အမှုတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။ […]
သမီးကို မုဒိမ်းကျင့်သူ သုံးဦးကို ဓါး နဲ့ထိုးသတ်တဲ့ မိခင် အမှုမှ ကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်…!
သမီးကို မုဒိမ်းကျင့်သူ သုံးဦးကို ဓါး နဲ့ထိုးသတ်တဲ့ မိခင် အမှုမှ ကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်…! သူမရဲ့ သမီး ကို အဆိုပါ သုံးဦးက မုဒိန်းကျင့် နေချိန် ယခုလိုတစ်ဟုန်ထိုး တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး “ ခြင်္သေ့ မေမေ ” လို့ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတစ်ဝှန်း အင်တာနက်သုံးစွဲသူများက ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။သူမကို […]
ယာဉ်မောင်းကို ကလေးက ကိုကို ၂ ယောက်လုပ်တာ အခန်းကျယ်ထဲ ခေါ်သွားတယ်လို့ ပြောသတဲ့လား
ယာဉ်မောင်းကို ကလေးက ကိုကို ၂ ယောက်လုပ်တာ အခန်းကျယ်ထဲ ခေါ်သွားတယ်လို့ ပြောသတဲ့လား ယာဉ်မောင်းတဲ့လား ???? ယာဉ်မောင်းကို ကလေးက ကိုကို လို့ခေါ်သတဲ့လား ???? ယာဉ်မောင်းကို ကလေးက ကိုကို ၂ ယောက်လုပ်တာ အခန်းကျယ်ထဲ ခေါ်သွားတယ်လို့ ပြောသတဲ့လား ???? ဆရာမက […]
ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကို တကယ် အရမ်းချစ်တာလို့ဝန်ခံလိုက်တဲ့ ဒေါင်း ဝတ်မှုန်ရွှေရည်နဲ့ ဒေါင်းနဲ့ဟာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ လိပ်ပြာစံအိမ်ရုပ်ရှင်မှာကတည်းက ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးမှုခံရတဲ့ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ပြီး ကစ်နဲ့ဒေါင်းနဲ့ကိုပရိသတ်တွေက အုံးအုံးကြွက်ကြွက်ဆူဆူညံညံနဲ့ကိုတစ်နိုင်ငံလုံးက သဘောတူခဲ့ကြတာပါ။ Press Show တွေ ပွဲတက်တွေမှာ ကစ်နဲ့အတူတူထိုင်ရတိုင်း ဒေါင်းက ကစ်ကို ကမ္ဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးရတနာတစ်ပါးလို တယုတယအမြတ်တနိုးငေးမောကြည့်နေခဲ့တဲ့ အကြည့်တွေကိုလည်း ပရိသတ်တော်တော်များများမှတ်မိကြဦးမှာပါ။ ဒေါင်းက အခုလည်းပဲ […]
သမီးလေး VICTORIA ရဲ့သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတရားခံမှာ ယာဉ်မောင်းအောင်ကြီး ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ချစ်သုဝေပြောပြီ
သမီးလေး VICTORIA ရဲ့သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတရားခံမှာ ယာဉ်မောင်းအောင်ကြီး ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ချစ်သုဝေပြောပြီ အနုပညာလောကမှာသာမက ဂီတလောကမှာပါ အောင်မြင်မှုများစွာနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေနဲ့ ဆယ်စုနှစ်တိုင်အောင်လျှောက်လှမ်းနေသူကတော့ ချစ်သုဝေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း ဝါသနာပါရာအနုပညာအလုပ်ကိုပဲဇောက်ချလုပ်ကိုင်လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသီဆိုတဲ့သီချင်းကောင်းများစွာဟာလည်း ယနေ့ထက်ထိပရိသတ်တွေရဲ့ကြားမှာရေပန်းစားနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် …။ ယနေ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ သက်ငယ်မုဒိန်းအမှုပပျောက်ရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး လူတိုင်းအင်တိုက်အားတိုက်ဆောင်ရွက်နေကြတာ မြင်ကြမှာပါနော်။ […]
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု ယာဉ်မောင်းကို အချက်သုံးချက်ကြောင့် မုဒိမ်းမှုဖြင့် တရားစွဲဟုဆို ဗစ်တိုးရီးယားအမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှ ယာဉ်မောင်းကို မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့(CID) က စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် အချက်သုံးချက်ကြောင့် ဒက္ခိဏခရိုင် တရားရုံးတွင် သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုဖြင့် တရားစွဲတင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသော ရဲအရာရှိတစ်ဦးမှ The Voice သို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ် […]